Ku biirista shirkadda Tilray Inc. Iyo Aphria Inc. Dhameystiray: Shirkadda Weyn ee Ugu Weyn Dunida Daqli ahaan • Dawooyinka Inc.eu
Shirkadaha Canadian Cannabis Tilray Inc. iyo Aphria Inc. ku dhawaaqay dhameystirka midowgooda Isniintii la soo dhaafay ka dib markii la ansaxiyay saamileyda labada shirkadood. Sidaas darteed, shirkadda la mideeyay waxay noqotay shirkadda ugu weyn adduunka ee xashiishadda, oo lagu qiyaaso dakhliga.
Labadii shirkadood ee xashiishka sameeyey lagu dhawaaqay bishii Diseembar inay ku midoobi doonaan magaca Tilray. Shirkadda cusub ee isku dhafan ayaa la rajeynayaa inay ku soo bandhigto is-dhexgal wax-ku-ool ah muddo 18 bilood gudahood ah marka la xiro heshiiskan, iyadoo soo saareysa faa'iido canshuur ah oo dhan $ 81 milyan ama ka badan.
Irwin D Simon, oo horey u ahaa agaasimaha guud iyo gudoomiyaha Aphria, ayaa hogaamin doona Tilray cusub, Tilray oo hada ah maamulaha guud Brendan Kennedy ayaa ku biiri doona guddiga maamulka.
Saamilayda Tilray ayaa u codeeyay heshiiska Jimcihii la soo dhaafay. Saamileyda Aphria ayaa sidaas ku helay 0,8381 oo ah saamiga Tilray qayb kasta oo Aphria ah oo ay hayaan.
Saamiyada shirkadda ayaa sii socon doona oo lagu qori doonaa Nasdaq iyadoo la hoos dhigayo calaamadda "TLRY" waxayna ka bilaabi doontaa ka hoos ganacsiga isla calaamadda Suuqa Ganacsi ee Toronto laga bilaabo maanta (Arbaca).
“Waxaan diirada saareynaa hada fulinta fulinta ahmiyadeena ugu sareysa ee soo laabashada, oo ay kujirto isdhexgalka ganacsiga iyo dardar galinta istiraatiijiyadeena kobaca adduunka Xiritaanada laxiriira Covid-19 waxay abuureen caqabado u gaar ah suuqyada Kanada iyo Jarmalka, iyo kuwa kale, ”Irwin D Simon cusub ayaa ku yiri hadal uu soo saaray.
Isku dar Tilray Inc. iyo Aphria Inc. diyaar u ah isbeddelada sharciga xashiishka
Shirkadda ka timid Tilray Inc. iyo Aphria Inc. waxay rajeyneysaa in si fiican loo dejiyo si looga faa'iideysto isbeddel kasta oo ku yimaada sharciga xashiishka Mareykanka, ayuu yiri. Shirkaddu waxay leedahay, iyo waxyaabo kale, SweetWater, oo ah macmacaanka biir farsamada gacanta. Sidoo kale milkiilaha Manitoba Harvest: sameeya hemp, CBDiyo alaabta fayoobaanta ee bixisa marin aan ka yarayn 17.000 oo dukaanno ku yaal Waqooyiga Ameerika.
Ku biirista shirkadda Tilray Inc. iyo Aphria Inc. dhameystirtay - wuxuu abuuraa shirkadda xashiishka ugu weyn adduunka ee ku saleysan dakhliga (afb.)
Shirkadda cusub ayaa la rajeynayaa inay ku guuleysato iibinta pro forma ee $ 874 million waxayna maamuli doontaa in ka badan 17 boqolkiiba suuqa tafaariiqda xashiishadda - saamiga ugu badan ee uu leeyahay soo saare shati haysta oo reer Kanada ah.
In kasta oo saamilayda Tilray ay taageereen heshiiska Aphria shirkii jimcihii, waxay ka codeeyeen in la kordhiyo raasumaalka saamiga shirkadda oo ka badnaa in ka badan 743 milyan oo saami oo laga dhigay 900 milyan oo saamiyadeed.
Ilaha ao CBC (EN), MarketWatch (EN), Yahoo! Maaliyadda (EN)
saamiyadaCanadacannabiskaydka xashiishkabeerista cannabismaaliyad ahaanbeerista cannabis
Aurora Cannabis waxay qaadataa quusto ka dib marka xuduudaha ay niyadjabaan qiimaha wax soo saarka cagaarka ah
Soo-saaraha xashiishadda Aurora Cannabis ayaa hoos u dhacay 2,51% ilaa $ 6,99 qayb kasta oo ka mid ah saamiga horraantii Talaadada ka dib markii uu soo sheegay warbixin hoose
Iftiin cagaaran oo lagu dhoofiyo geedo dabiici ah oo dheeraad ah
Wasiirka Bruno Bruins (Daryeelka Caafimaadka) wuxuu ogolaaday dhoofinta haramaha dawada ee dheeriga ah ...
Sideed ugu sii nasan doontaa waqtigan corona cudurka faafa ee COVID-19?